कुर्सी तोडफोडका बीच सभामुखले बैठक चलाए, सत्ता पक्षका सांसदले पनि बोल्न पाएनन् | Ratopati
शनिबार १५ फागुन, २०७७ Saturday, 27 February, 2021
प्रदेश सभामा बबाल
कुर्सी तोडफोडका बीच सभामुखले बैठक चलाए, सत्ता पक्षका सांसदले पनि बोल्न पाएनन्
personतेजेन्द्र के.सी. exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १९, २०७७ chat_bubble_outline0
तेजेन्द्र के.सी. / राताेपाटी
बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा तनावका बीच नै प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने रणनीतिमा देखिएको छ। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा तोडफोड, नाराबाजी र आरोप प्रत्यारोपका बीच संसदीय कारबाही भइरहेको थियो । सामान्यतयाः विपक्षीले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित गर्ने र सहमतिको प्रयास गर्ने गरिन्छ । तर सोमबारको प्रदेशसभाको दृश्य त्यस्तो रहेन । बलजफ्ती सभाुमखले बैठक चलाए भने विपक्षीले पनि आफ्नो मर्यादा भुल्दै कुर्सी नै तोडफोटमा उत्रिए ।
प्रदेशसभा बैठकमा काँग्रेस सांसदहरुले बबाल मच्चाउँदै होहल्ला जारी राखेपनि सभामुखले सांसदहरुलाई बोल्न दिएका छन् । तनावकै बीच केही सत्ता पक्षका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्ताव लगेपछि तनाव बढेको हो । सोही क्रममा आक्रोशित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सोमबारको पहिलो बैठक पनि अवरुद्ध परोको थियो ।
पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि बोलाइएको दोस्रो बैठकमा सभामुखले नेकपाका सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठ र विष्णु पन्थी, हरि रिजाल, दिपेन्द्र पुन, जनमोर्चाकी तारा जिसी र संघीय समाजवादी पार्टीका सहश्राम यादवलाई आफ्नो धारणाराख्न समय दिए ।
बोल्ने क्रममा सत्ता पक्षकै ससांदहरुले समेत जबरजस्ती प्रतिवेदन ल्याएको भन्दे विरोध गरेका थिए । नेकपा संसाद भोज प्रसाद श्रेष्ठले दाङ राजधानी बनाउनु पर्ने कारण र प्रदेश सभाले बनाएको विज्ञ टोली प्रतिवेदन सार्वजनिक माग गरे । लोकतन्त्रमा राजधानी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बोल्न नदिनु गतल भएको बताए ।
नेकपाका अर्का संसाद विष्णु पन्थीले कपिलवस्तु राजधानी बनाउनु पर्ने धारण राखे । उनले कपिलवस्तु विभिन्न कारणले उपयुक्त भएको भन्दै कपिलवस्तुमा राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरे । यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सासद सहश्राम यादवले पनि कपिलवस्तु राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरे । यस्तै सत्तापक्षमा सासद हरि रिजाल, दिपेन्द्र पुन, विजय बहादुर यादवले भने दाङ राजधानी उपयुक्त भएको जिकिर गर्दै सबैले एकमतले पास गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजीसहित कुर्सी भाँच्दा तत्कालिन संविधान सभामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले कुर्सी तोडफोड गरेको घटना धेरैले सम्झिए । आजको बैठकमा काँग्रेसको नाराबाजी र तोडफोडका बीच पनि सभामुखले बैठक अघि बढाए भने प्रस्तावबारे सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि बोल्नका लागि पर्याप्त समय नपाउँदा विरोध गरेका थिए ।
यसो त बोल्ने कार्यसूचीमा रहेका ३ सांसदले बोल्नै पाएनन् । कृष्ण न्यौपाने, तुल्सी चौधरी र नारायण आचार्यले कार्यसूची भएपनि बोल्न नपाएका हुन् । उनीहरु तीनै सत्तापक्षीय सांसद हुन् ।
कांग्रेसले सोमबार बिहान सरकारले ल्याएको प्रस्ताव केही दिनलाई रोकेर सबै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। सो प्रस्तावमा नेकपाले असहमति जनाएपछि काँग्रेस रुष्ट बनेको हो । सभामुखले भोलि दिउँसो १२ बजेलाई बैठक बोलाएका छन् ।
यो पनि ....
प्रदेशसभा बैठकमा बबाल, काँग्रेस सांसदद्वारा कुर्सी तोडफोड
प्रदेश ५ : राजधानी सार्ने निर्णयले नेकपाकै केही नेताको राजनीतिक भविष्य धरापमा, पार्टीको भविष्य कस्तो होला ?
केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले सडकमा उखान तुक्का भन्दै हिँडेकोमा प्रदेशमन्त्रीको व्यङ्ग्य
राजापुर क्षेत्रका लागि दुईवटा एम्बुलेन्स खरीद
दाङमा ४ वटा बेवारिसे मोटरसाइकल फेला
बुटवल उपमहानगरको ६२ औं स्थापना दिवस: महानगरीय अवधारणाका योजना कार्यान्वयन गर्दै
गुल्मीदरवारको गाउँसभा सुरु : विकास र सुशासनमा अब्बल रहेको दावी
विप्लव समूहका विद्यार्थी नेतासहित विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश
सकियो एक महिने स्वस्थानी ब्रत (फोटोफिचर)
सम्बन्धविच्छेदपछि सैफले अमृतालाई दिएका थिए यति करोड
म्याग्दीका गाउँलाई शहरसँग जोड्न १३ पक्की पुल बन्दै
पुस्तक अंश : राजतन्त्रको मलामी
संसदभित्रको खेलोमेलो झन् जटिल बन्ने
आज मेघगर्जन र चट्टयाङसहित वर्षाको सम्भावना